mairie-antananarivo – Atrikasa niarahana tamin’ny ireo mpianatry ny ISCAM sy ny CUA.
Atrikasa niarahana tamin’ny ireo mpianatry ny ISCAM sy ny CUA.
auteur 29 septambra 2017 Commentaires fermés
Notontosaina tamin’ny Alatsinainy faha-25 Septembre teo ny atrikasa niarahana tamin’ireo mpianatrin’ny Universite Iscam na ny ( Institut Superieure de la Communication des Affaires et du Management) ka ny kilasy Master 1 sy Master 2 sampam-pianarana “Design Thinking”, no nanan- tanteraka izany. Ny “Direction Culturelle et de la Vie Communauteur” ao amin’ny sampan-draharahan’ny Fizahantany izay ato amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra moa no anisan’ny niahy sy nampiantrano azy ireo anantontosaina ny asa. Nisy ihany ko ireo mpiray miombon’antoka tamin’ny fananterahana izany toy ny: CUA, ISCAM, ary ny ONUDI.
Manodidina ny 35 eo ho eo ny isan’ireo mpianatra nanatrika izany raha ny fantatra dia ny “Etude de l’Environnenment et Place Publique et Marché” no novoizina tamin’izany ka ny tanjona dia ny hanatsarana ny tanànan’Antananarivo amin’ny fomba maoderina sy mivoatra mba isarihana ny tsirairay ho tia ny Tanana .
Haharitra dimy andro ny atrik’asa ka ho faranana ny Sabotsy faha 30 ny volana Septembre ho avy izao eny amin’ny ISCAM izay arahana ny fanolorana ny tetik’asa, izay marihina fa mbola andiany voalohany ihany izy ity. Eo amin’ny fatanterahana ny asa dia misy ny manam-pahaizana avy any ivelany hanampy sy nanaraka ireo mpianatra. Marihana moa fa roa taona no vinavina anaovana ny asa fa fanombohany ihany izao.